Vaovao | Page 11 | Malagasy eto Italia
Ho antsika eto Roma sy ny manodidina, hisy fialamboly hanasana antsika ity amin'ny alatsinain'ny Paka 2014 ity. Izany dia hatao eny amin'ny pizzeria Re Grano eny Vitinia, via Lago Santo, 23 . Amin'ny 9 ora sy sasany maraina no hifamotoanana eny. Samia mivatsy sakafo sy tsakitsaky isankarazany,... tohiny
Nodimandry ny dadan'i Vola any Arezzo.
Amin'ny Finoana ny Fitsanganana amin'ny maty no hampandrenesana antsika fa nody any amin'ny Ray ny alatsinainy 3 febroary 2014 ny mpanompony Charles RAJAOBELINA Hoy : - ny vadiny : Jeanne Rajaobelina - ny zanany : Luciano Rajaobelina mivady sy ny zanany, Alessandro Torzoni mivady sy ny zanany. Toky... tohiny
Fifampiarahabana tratry ny taona 2014
Amin'ny alahady 12 janoary 2014 no atao ny fifampiarahaban'ny Malagasy rehetra eto Roma nahatratra ny taona ka eny amin'ny fiangonana Santa Maria Ausiliatrice no anaovana izany. (Piazza Santa Maria Ausiliatrice 54 - via Tuscolana). Hanomboka amin'ny 11 ora sy sasany ny fotoam-pivavahana iraisam-... tohiny
Fanaovam-beloma ny taona 2013 eto Roma.
Ny Malagasy monina eto Roma sy ny manodidina na anaty fikambanana na tsia dia hiaraka hilanonana ao amin'ny ambassade malagasy hitsena ny taona vaovao. Tsy misy mikarakara manokana fa samy efa nandray sy mandray izay vitany sy izay tandrify azy. Ao ny manomana ny mozika, ao ny hanentana, ao ny... tohiny
Bazary karakarain'ny vondron'ny vehivavy ao amin'ny Fiangonana Protestanta
Ny fikambanan'ny vondron'ny vehivavy ao amin'ny "Communauté Protestante Francophone" eto Roma dia manasa antsika rehetra hanatrika ny bazary izay hataony ny 1 desambra 2013 ho avy izao manomboka amin'ny 1 ora tolakandro ao amin'ny fiangonana Via Firenze 38 Roma. Sakafo malagasy sy afrikanina no ho... tohiny
Takariva Fifanampiana (Serata Solidale)
Ny Associazione Tetezana Onlus dia faly manasa antsika rehetra amin'ny Takariva Fifanampiana (Serata Solidale) izay karakarain'izy ireo amin'ny asabotsy 23 novambra 2013 manomboka amin'ny 7 ora hariva. Ny toerana dia ao amin'ny Via Manzoni 5, Roma. Izany takariva izany dia hohafanain'ny tarika KA... tohiny
Famaranana ny taona litorjika-n'ny Fiangonana Katolika eto Roma
Araka ny vaovao nampitaina dia ny 7 jolay 2013 izao no hatao eny amin’ny Fikambanana trinitera (Curia Generalizia), eny via Massimi 114/C ny famaranana ny taom-pikatrohana 2012/2013 ho an'ny Ankohonana Katolika Victoire Rasoamanarivo eto Roma. Toa izao ny fandaminana amin'izany: - hatomboka amin’ny... tohiny
Ny Associazione Tetezana Onlus dia faly manasa antsika Malagasy rehetra eto Italia amin'ny "Roa andro natokana ho an'i Madagasikara" izay karakarainy miaraka amin'ny Museo Civico di Zoologia (Roma) sy ny Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino) nampitondraina ny lohahevitra hoe "Ny olombelona... tohiny